Author: Gugul Sazahn
Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ]. Eray bixinta Ibn Xajar: Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri: Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn.
Wuluuq waxaa la yiraahaa waxyaalaha carrabka wax ku cabba, sida bisadda iyo ugaadha iyo eygiyo kuwaasoo kale, ku cabidda ay biyaha iyo wixii la mid ah carrabka ku cabbaan ayaa wuluuq la yiraahaa. Notify me of new comments via email.
Xadiisku markaa wuxuu tusinayaa: Danta koowaad ee aanu ka leenahay casharadan diyaarintoodu waa in dadku fahmaan xadiiska Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- kuna dhaqmaan. Allaa markaa shay walba masaalixdiisa ku hanuuniyey, oo waa garanayaa shay walbaba waxa jismigiisa ku jira iyo waxa cadowgiisiyo waxa nafcigiisiyo waa yaqaanaa. Xadiiskan riwaayada Abii Daawuudna marka iyadu saxiix weeyaan waxaa saxiix yeelay Shaykh Albaani: Markaa weriyihii daciifka ahaa wuxuu helayaa cid ku raacday wixii uu weriyey oo waa ku xoogaysanayaa.
Kalamadahan oo kale waxaan ku bedelnay sida caadi ahaan loo qoro Af Soomaaliga: Aashuunka weyn baa qullah la yiraahaa, qullana waxaa loogu magacaabay waa mid la qaadi karoo qof xoog leh uu qaadi karo; dhulka ka hinjin karo. Hadduu xadiisku dheer yahay, faqra kasta cinwaan-hoosaad baanu u samaynay si akhrintu u fududaato.
Last Drivers BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON CON VERSICULOS EN CADENA TEMATICA EPUB DOWNLOAD
Oo amraayey inay wada dardarsadaan oo ay hareeraha ka joogsadaan.
You are commenting using your Twitter account. Isagoo masjidkii meel kale kaadidii sii gaarsiiyaana mafsada kalay ahayd. Please log in using one of these methods to post your comment: Create a website or blog at Marzam.
Soomaaliyeyntaasi waa mid caan ah oo culumadoo dhani intaan maqlay adeegsadaan xertana la baro. Yacnii xayawaanaadka badda ee badda ku dhintay, ama kolkii laga soo bixiyo ha dhinto oo kaluumaystuhu uusoo bixiyo, ama baddu intay soo tuurto saa haku dhinto, ama badda dhexdeeda intuu ku dhinto isaga oo kor heehaabaya halaga bixiyo, halaga soo qaatee, intuba markaa xalaal weeyaan.
Bulukqul sidaa macnaheedu waxa weeyaan biyihii haddii lagu kaajo fadhiyey inay saa ku nijaasoobayaan, waa inayse biyahaasu yihiin biyo yar oo qullataynka ka yar. Markaa sidaa macnaheedu waxaa weeyaan biyaha wixii bedelaayu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene inay nijaasaynayaan. Waana sidaa uu sheegay oo xadiisku saxiix weeyaan, waxaa saxiix yeelay Albaanii: Xadiiska isnaadkiisuna waa maaram, isnaadka ragga weriyey [xadiiska] baa la yiraahaa.
Wajibad waa ururiyaha qoraalada diiniga ah si ay dadka jeceli inay bartaan diintood ugu fududaato akhrinta iyo daabacaada qoraalada oo af-Somali iyo English ka kooban Inshaa Allaah hadan waxaan ku guda jirtaa si aan ugu soo kordhin lahayn qoraalada Carabiga ah.
Laakiin labada xadiisba, xadiiska Sawbaan iyo Abuu Umaamah labadiisa riwaayaba waa daciif, kol haddii uu daciif yahayna xukun lagama qaadanayo. Xadiiskanina markaa kii horuu la mid yahay oo Bayhaqi baa markaa lafdigan isagu ku weriyey. Bukhaari isaga waxaa u sugnaaday: Kitaab walba waxaa lagu soo aruuriyey xadiisyada la xidhiidha axkaamta shariicada. Laakiin haddii aan lagu dhex kaajin laguna dhex qabeysanin oo biyihii inta lasoo darsado musqusha lala tago oo sidaa lagu qabeysto taas marka dhib maleh.
Xadiisku waa saxiix oo waxaa saxiix yeelay shaykh Albaanii: Labada dhiigna beeryarta iyo beerka weeyaan.
Mashruuca qoraal-u-rogista casharadii Shaykh Shariif Cabdinuur W: Ibn Cabbaas radiyal Laahu canhumaa waxaa laga weriyey inuu yiri: Buuuqul deydeyaayoo carrabkuu soo bixbixanayaayoo wax uu jaqaa buu deydeyayaa.
Salliga Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- ma aanaan Soomaaliyeyn ee sidiisa ayaan u buluusul. Haddaan lagu qabeysan karin markaa kumana weyso qaadan karo. Marka saabuun halagu dhaqo maanuu dhihine, ciid halagu dhaqo buu dhahay. Sharax Abii Qadaata na magaciisu waa al Xaarith ibn Ribciyy. Ciidda bedelkeedii shaambo iyo oomo iyo saabuun iyo ma aha; wax kale marka kuma filla waa ciiddaas.
Rasuulkii Alle — sallal Laahu calayhi wasallam- badda ayuu wuxuu buluuqu, yiri: Waxyaalahay ku andacoodaanna waxaa ka mid ah: Tanna waxa weeyaan biyihii intuu ku kaajo inuu biyihii ku qabeysto xattaa intuu weel soo darsado uu dibadda meel kale la tago musqul iyo la tagaba ha ahaatee. Rasuulka Allaan maqlay bulkuqul hadalkan lohoo yiri najaas ma aha oo waxay ka mid tahay inta idinku dhex warwareegaysata ee idinku naban.
Saasuu masalada xukunkeedu noqonayaa.
Kii horena waa amray ka soo socdaana waa sheegi doonaa. Nin asxaabtii Nebiga sallal Laahu calayhi wasallam ka mid ah waxaa laga weriyey inuu yiri: